​अमेरिकी नेतृत्वको मिसाइल आक्रमणपछि के गर्दैछन् सिरियाली राष्ट्रपति ?
Fri, Mar 22, 2019 | 12:33:38 NST
17:36 PM ( 11 months ago )
Total Views: 18.9 K
वैशाख १ – अमेरिका, फ्रान्स तथा ब्रिटेलले शनिबार सिरियाका कैयौँ टाउँमा मिसाइल आक्रमण गरेको छ ।
अमेरिका र उसका सहयोगी देशहरुले यी ठाउँमा रासायनिक हतियार भएको दावी गर्दै आएका छन् । पछिल्लो पटक सिरियामा रासायनिक हतियारको प्रयोग गर्दै हिंसा भएको पश्चिमा राष्ट्रहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
सिरियाको आधिकारिक समाचार एजेन्सी सनाका अनुसार मिसाइल आक्रमणमा ३ जना सर्वसाधारण घाइते भएका छन् । साथै राजधानी दमास्कसमा रहेको एउटा रिसर्च इन्स्टिच्यूटमा पनि क्षति पुगेको छ ।
आक्रमणपछि सिरियाको अवस्था कस्तो छ ?
सिरियाको राजधानी दमास्कसमा आम सर्वसाधारण अमेरिकाप्रति आक्रोशित बनेका छन् । उनीहरु राजधानीका सडकहरुमा हातमा सिरियाली झण्डा र बन्दुक लिएर प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
प्रदशर्नमा सर्वसाधारणको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ । प्रदर्शनमा उत्रिनेहरुले राष्ट्रपति बशर अल असदको तस्बिर हातमा बोकेका छन् ।
त्यस्तै सिरियाली राष्ट्रपतिको ट्विटर ह्याण्डलबाट सार्वजनिक गरिएको एउटा भिडियोमा राष्ट्रपति असद आफ्नो कार्यालय गइरहेको दृश्य देखाइएको छ । भिडियोमाफर्त पश्चिमा देशको आक्रमणबाट सिरियामा खासै असर नपरेको देखाउन खोजिएको छ ।
— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 14 April 2018
रुसको रक्षा मन्त्रालयले जनाए अनुसार सिरियाली सेनाले दशकौँ पुरानो हतियारको सहयोगले अमेरिकाको नेतृत्वमा भएको मिसाइल आक्रमणलाई सामना गरेको छ ।
रुसी समाचार संस्था इन्टरफ्याक्सले रुसी रक्षा मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ, ‘सिरियन एयर डिफेन्स सिस्टम एस–१२५, एस–१२०, बक तथा क्वार्दतको प्रयोग गरेर मिसाइल आक्रमण रोकिएको छ । यी सैन्य उपकरणहरु ३० वर्ष पहिले रुसले बनाएको हो ।’ साथै रुसको एयर–डिफेन्स सिस्टमको प्रयोग नगरिएको पनि सिरियाले स्पष्ट गरेको छ ।
के सिरियालाई पहिले नै थाहा थियो ?
सिरियाली सरकारले विभिन्न सैन्य अखडाहरु पहिले नै खाली गरेको थियो ।
एक सिरियाली अधिकारीलाई रोयटर्सलाई आफूहरुलाई आक्रमणको बारेमा पहिले जानकारी भएको बताउँदै भने, ‘हामीलाई रुसले पहिले नै आक्रमणको बारेमा सूचना दिएको थियो । त्यसैले केही दिन पहिले सबै सैन्य अखडाहरु खाली गरेका थियौँ ।’
रुस के भन्छ ?
रुसी रक्षा मन्त्रालयले अमेरिकी नेतृत्वमा भएको आक्रमणमा रुसी नेभल तथा एयरबेसलाई निशाना नबनाइएको जनाएको छ । साथै अमेरिकाका लागि रुसी राजदूतले आफ्नो सहयोगी देशमाथि भएको आक्रमणको नतिजा भोग्नुपर्ने पश्चिमा देशहरुलाई चेतावनी दिएका छन् ।